I-11 ekwindla 2020-Iindaba ezinomvuzo-Isiseko soMvuzo
Ikhaya I-11 Autumn 2020
Ndiyabulisa! Njengokuba imozulu ijika ibanda, sineendaba ezinkulu kule ncwadana enezinto ezintle zokufudumeza intliziyo yakho, kunye nezinye ezimnyama ukukukhuthaza ukuba uthathe inyathelo elikhulu. Sithathe lo mfanekiso ungasentla kuhambo olusebenza eIreland ekwindla edlulileyo. Kukhunjulwa i-rose edumileyo yeTralee. Zonke iimpendulo zamkelekile kuMary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Ukuphehlelelwa kwezicwangciso ezi-7 zasimahla zezifundo
Iindaba Ezinkulu! Isiseko soMvuzo siyavuya ukwazisa ngokusungulwa kwezicwangciso zaso eziphambili ze-7 kwi-Intanethi ye-Intanethi kunye nokuthumela imiyalezo ngefowuni kwizikolo eziziisekondari, simahla. Kukho ii-UK, iAmerican kunye ne-International Editions ezikhoyo. Izifundo zihambelana (UK kunye neScotland) izikhokelo zikarhulumente malunga nobudlelwane kunye nemfundo yezesondo kwaye ngoku zikulungele ukuhanjiswa. Indlela yethu eyahlukileyo igxile kwingqondo yokufikisa. Isiseko soMvuzo siqinisekisiwe yiKholeji yaseRoyal yamaGcisa ngokuBanzi unyaka we-4 njengomboneleli oqinisekisiweyo woqeqesho 'kwiZonografi kunye nokuSebenza ngokuSebenza'.
"Kuyo yonke imisebenzi ekwi-Intanethi, i-porn inamandla okuba ngumlutha, " yatsho i-Dutch neuroscientists Meerkerk okqhubekayo.
Okokuqala, ukuncitshiswa kwicandelo likarhulumente kule minyaka ilishumi idlulileyo kuthetha ukuba izikolo zinemali encinci kakhulu yezifundo ezongezelelweyo. Okwesibini, ukulibaziseka ngelishwa ekuphumezeni umthetho wokuqinisekisa ubudala (jonga iindaba zeendaba ezingezantsi) ezinokuthintela abantwana abancinci ukuba bakhubeke kwizinto zabantu abadala, ngokuqinisekileyo kukhokelele ekwandeni kwabo banakho ukufikelela simahla, ukusasaza, i-hardcore porn ngexesha lobhubhane. Ngale ndlela abo banesidingo banokufikelela kwimathiriyeli ezimeleyo esekwe kuphando lwenzululwazi lwamva nje.
Nceda usincede sisasaze igama malunga nezifundo. Ukuba unqwenela ukusinceda kwimishini yethu ngomnikelo, iqhosha elitsha lokuNikela liya kufumaneka kungekudala. Bona izifundo Apha. Jonga nathi blog kuzo ukwazisa ngokukhawuleza.
Nalu ulonwabo, oopopayi yokuzonwabisa ebizwa, "Luyintoni uthando?" njengesikhumbuzo sento esiyihoya kunye nendlela izinto ezincinci ezibaluleke ngayo. Akufuneki silibale le njongo kwaye sigxile kuphela kwimingcipheko ejikeleze ukusetyenziswa kwe-porn. Ukondla imicimbi yothando nayo.
Ukuthinta ngothando kubalulekile kwimpilo yethu kuba kusenza sizive sikhuselekile, sikhathalelwe kwaye sincinci gxi niniswa. Ugqibele nini ukuchukunyiswa? Ukufumanisa ngakumbi, i-BBC yenza uphando olubizwa ngokuba Uvavanyo lweTouch Ngale ndlela iphantsi kophando. Olu phando luqale phakathi kukaJanuwari noMatshi walo nyaka. Phantse abantu abangama-44,000 bathathe inxaxheba kumazwe ali-112 ahlukeneyo. Kukho uthotho lweenkqubo kunye namanqaku malunga neziphumo zophando. Nazi izinto ezigqwesileyo kuthi kwizinto ezimbalwa ezipapashiweyo:
Ngokwahlukileyo, uhlobo olubi ngakumbi lokuthinta isondo luyanda phakathi kwabantu abancinci. Yile nto imboni ye-porn kunye neepundits zayo ziye zaphinda zaziwa njenge 'play air' okanye 'ukudlala umoya' ukuze izwakale ikhuselekile kwaye imnandi. Ayiyo. Igama layo lokwenyani kukukrwitshwa okungabulali.
UGqr Bichard ngugqirha kwiNkonzo yoKwenzakala kweBongo yaseWales. Uthetha “ngothotho lokonzakala okubangelwa kukukrwitshwa okungabulali kunokubandakanya ukubanjwa kwentliziyo, ukubethwa sisisu, ukuphuma kwesisu, ukungakwazi ukuzibamba, ukuphazamiseka ekuthetheni, ukuxhuzula, ukukhubazeka, kunye nezinye iindlela zokulimala kwengqondo ixesha elide.” Bona eyethu blog kuyo.
Ingqinisiso yobudala beNkomfa kaJuni ka-2020
Ukuba ufuna ukwazi ukuba singalunciphisa njani ukufikelela kwabantwana kuhlobo loonografi olubonisa ubundlobongela obuphathelele kwezesondo, unokuba nomdla koku. Isiseko soMvuzo sichithe ihlobo lisebenza noJohn Carr, i-OBE, uNobhala woManyano lwaBantwana lwaBantwana lwase-UK kuKhuseleko lwe-Intanethi, ukuvelisa iNkomfa yokuQinisekiswa kweMinyaka yokuqala yoonografi. Kwenzeka ngaphezulu kweentsuku ezintathu ezinesiqingatha ngoJuni 3 nangabathathi-nxaxheba abangaphezu kwe-2020 abavela kumazwe angama-160. Abameli bezentlalontle yabantwana, amagqwetha, izifundiswa, amagosa aseburhulumenteni, iingcali zenzululwazi kunye neenkampani zetekhnoloji bonke baye. Bona eyethu blog kuyo. Nantsi ingxelo yokugqibela ukusuka kwinkomfa.
Isikhokelo sabazali samahhala kwi-intanethi ye-Intanethi
Sihlaziya isikhokelo sabazali rhoqo xa kukho ulwazi olutsha esinokongeza kulo. Izele ziingcebiso, iividiyo kunye nezinye izixhobo zokunceda abazali baqonde ukuba kutheni iphonografi namhlanje yahlukile kwi-porn yexesha elidlulileyo kwaye ngenxa yoko ifuna eyahlukileyo indlela. Kukho iiwebhusayithi kunye neencwadi, umzekelo, ukunceda abazali babe nezo ngxoxo zinzima nabantwana babo.
"Siyinto esiphindaphindayo ukuyenza"